Fact Check: ဒီပုံတွေက KIA နဲ့ တပ်မတော်အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပုံမဟုတ်ပါ - Factcrescendo Myanmar | The Leading Fact Checking Website
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးလက်နက်ကိုင်(Kachin Independence Army)က စစ်ကားတစ်စီးကို ဖောက်ခွဲပြီး စစ်သားသုံးယောက်နဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖမ်းမိတယ်လို့ ရေးသားထားတဲ့ပို့စ်ကို ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူ ထောင်ပေါင်းများစွာက ပြန်လည်မျှဝေထားပါတယ်။
သို့သော်လည်း ဓာတ်ပုံတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များအတွင်း ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးဓာတ်ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုကွန်ယက် အသုံးပြုသူတွေကို နားလည်မှုလွဲစေနိုင်ပြီး ပျံ့နှံ့မှုအားကောင်းခဲ့တဲ့ပို့စ်ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါတယ်။
“8. 3. 2021 ရက်နေ့ ( 10..30..အချိန်မန်းလေးမူဆယ်လမ်းကြောင်းတွင် အသင့်စောင့်နေသော KIA. မှ မအလ ကားတစ်စီးနဲ့လော်ဘီသုံးယောက်လက်နှက်ခဲရမ်းများနင့်အတူသိမ်းဆဲလိုက်ကြောင်းသရပါသည်
”လို့ ရေးသားထားတဲ့ပို့စ်ကို “Min Min Oo”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူက မျှဝေထားပါတယ်။ တူညီစွာရေးသားထားပြီး ပျံ့နှံမှုအား ကောင်းခဲ့တဲ့ပို့တွေကို ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာမှာလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံကို Google မှာ မှာပုံရှာနည်းအသုံးပြုပြီးရှာဖွေရာမှာ စစ်ကားတစ်စီးမီးလောင်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေမှာ အင်တာနက်မှာပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီး ဓာတ်ပုံဖြစ်တာအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါတယ်။
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးအနီးရှိ နမ့်ကွတ်ရွာအနီးဝန်းကျင်တွင် မူဆယ်မှ ဆင်းလာသည့် တပ်မတော်ယာဉ်တန်းကို တအောင်း လက်နက်ကိုင် (Taang National Liberation Army-TNLA)က မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ ဓာတ်ပုံလို့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မေလ ၂၉ ရက်စွဲနဲ့ ဧရာဝတီသတင်းဌာနဖော်ပြတဲ့ သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။
စစ်သား ၃ ယောက်ဒူးထောက်လျက် ရှေ့မှာလက်နက်တွေနဲ့ပုံဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ရခိုင်လက်နက်ကိုင်(Arakan Army-AA)အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးထားစဉ်က ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
သေနတ်၊ဗုံးသီးနဲ့ အမြောက်ဆံတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံကို အင်တာနက်မှာအစောဆုံးပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကို ရှာဖွေကြည့်ရာမှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ြသဂုတ် ၁၇ ရက်က thefirearmblog.com မှာ စတင်အသုံးပြုထားတာတွေ့ရပါတယ်။
မူရင်းလင်ခ့် – Thefirearmblog.com | Archive link
အထက်ပါအချက်အလက်အရ အင်တာနက်မှာပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုအသုံးပြုပြီး KIA က စစ်ကားတစ်စီးကို ဖောက်ခွဲပြီး စစ်သားသုံးယောက်ကို လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ဓာတ်ပုံအဖြစ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Title:ဒီပုံတွေက KIA နဲ့ တပ်မတော်အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပုံမဟုတ်ပါ
Tagged Claim ReviewKIAတပ်မတော်